Raga Soomalida Jacayl Iyo Romantic Waxba Kama Yaqaaniin daawo cadeentaan - iftineducation.com
iftineducation.com – Ninka soomaaliyeed waa nin qalafsan oo aan kalgacal iyo naxariis waxba ka ogayn, ninka soomaaliyeed ma yaqaano sida xaaskiisa loo koolkooliyo, ninka soomaaliyeed waxba kama yaqaano romantic, ninka soomaaliyeed ninka soomaaliyeed ninka soomaaliyeed waa sidaas iyo sidaas…. Waa hadalo ay isla dhex maraan hablo iyo dumar badan oo soomaaliyeed, hadaba hadaladan maxaa ka jira, maxaa ku kalifay inay in aad u badan oo dumarka soomaaliyeed ahi ay isku raacaan arintan.
Ugu danbayntii ninka soomaaliyeed romantic maaha hadii qaabka uu kuu koolkoolin lahaaba uuna ogayn oo aadan u sheegan adiguba, niman badan waxay aad isoogu mashquuliyaan sidii ay hadiyad ugu gayn lahaayeen xaaskooda, ciladuse waxay tahay ma yaqaano maxaad ka heshaa iyo maxaadan ka helin. Waxaad la soo boodaysaa oo muu ogaado maadama oo aan xaaskiisii ahay, waa runtaa oo aad ayaan kuugu raacsanahay taas, hadii uuna dan ka lahayn adigu ka dhaadhici oo tus nooca aad ka hesho hadiyadaha oo kalsooni buuxda sii wuxuu kuu keenana ha yasin oo xaqirin. Romantic iyo koolkoolis midna kuu dhadhami maayo marba hadii aadan ogayn maxaad ka heshaa, ma hadiyad baakad shukulaato ah ayuu kuu keenaa mise wuxuu kuu keena dharka hoosta laga xidho mise mise… intaasi hadii ayna kuu kala cadayn adigaa u baahan darsi romantic ah walaashayeey.